Degso WinRAR loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (3.07 MB)
Maanta, Winrar waa barnaamijka ugu dhammaystiran oo leh astaamaha ugu wanaagsan ee ka mid ah barnaamijyada culeyska faylka. Barnaamijka, oo taageera qaabab badan oo fayl ah, ayaa ku soo jiidanaysa rakibidda iyo adeegsiga fudud. Nooca Windows ee Winrar, oo si buuxda u taageera qaababka ZIP iyo RAR oo bixiya taageero buuxda kaydinta, waa codsi caan ka ah adduunka si aan faylasha loogu kala firdhin jawiga dhijitaalka ah oo ayna qaadan meel badan.
Waa maxay Winrar?
Winrar, oo loo adeegsado sidii barnaamij kombiyuutar ah, waa softiweer u saamaxaya dukumiintiyada in lagu keydiyo warbaahinta dhijitaalka ah. Eugene Roshal waa soosaaraha koowaad ee softiweerka. Alexander Roshal ayaa markii dambe lagu daray kooxda Roshal ee horumarinta software -ka. Software -ka, oo loogu deeqay adeegsadayaasha luqado badan, oo ay ku jiraan Turki, waa aalad wax ku ool u ah kaydinta iyadoo la yareynayo cabirka faylka iyo sidoo kale in la cadaadiyo faylasha.
Maanta, faylal badan oo laga soo dejiyay internetka ayaa u muuqda faylal la cadaadiyey. Si loo isticmaalo ama loo furo faylashaas, barnaamijka riixa faylka Winrar waa in lagu rakibaa kombiyuutarka. Winrar, oo ah barnaamij loo baahan yahay in la cadaadiyo oo la keydiyo faylasha jira, iyo sidoo kale in la furo oo la isticmaalo faylasha la cadaadiyey ee laga soo dejiyey internetka, ayaa fududeeya shaqada qofka isticmaala faaiidooyin badan.
Maxay Sameysaa Winrar?
Aynu taxno sababta Winrar, barnaamij loo sameeyay si loogu isticmaalo qaabka RAR oo ay taageerayaan tobanaan nidaamyo hawlgal ah, ayaa loogu baahan yahay sida soo socota:
Amniga: Amniga feylasha kumbuyuutarka waligiis wuxuu ahaa arin muhiim ah. Isku -uruurinta iyo kaydinta faylasha had iyo jeer waa faa iido u leh adeegsadaha xagga amniga. Marka faylasha lagu cadaadiyo furaha sirta ah, waxay aad uga ammaan badan yihiin halista fayraska marka loo eego faylasha furan. Faylasha la cadaadiyey oo sir ah aad bay u adag tahay in fayras lagu jaro marka loo eego faylasha kale.
Qaab -dhismeedka Faylka: Ku cadaadin iyo kaydinta daraasiin faylal bayada kombiyuutarka maadaama hal ama dhowr fayl ay door muhiim ah ka ciyaaraan qaabeynta faylka. Miisaska dadku ku badan yahay oo indhuhu qabsanayaan waa jawi shaqo oo si xun u saameeya hufnaanta shaqada. Cadaadinta iyo kaydinta faylasha hab habaysan ayaa u fududaynaysa isticmaalaha.
Kaydinta Meesha: Iyada oo Winrar ah, way fududahay in la helo faylasha loo baahan yahay, iyo booska ay ku jiraan faylasha ku jira dariiqa adag ayaa sidoo kale la dhimay. Iyada oo meel bannaan iyo kaydka kootada, kombiyuutarka si aad u tayo badan loo adeegsado. Iyadoo la tixgelinayo in faylasha lagu yareeyay 80% Winrar, waxaa si aad ah loo fahmay inta kaydinta boosku tahay.
Faaiidada Faylka Kaliya: Ka sokow u haynta faylasha jira hal fayl, Winrar wuxuu awood u siiyaa faylasha laga soo dejisto internetka in loo soo dejiyo sida fayl halkii hal-hal, waxayna sidoo kale meesha ka saaraysaa dhibka helitaanka faylka faylasha la soo dejiyey mid -mid-mid.
Wareejinta Faylka: Ku wareejinta feylasha mid-mid-ka-mid ah e-maylku waa mid dhib badan xagga shaqada iyo waqtiga. Si kastaba ha noqotee, sida faylka keli ah, wareejinta ayaa degdeg ah, oo gelinta faylasha internetka waxay noqonaysaa mid sahlan. Tartanka maanta ka dhanka ah waqtiga, u gudbinta faylal fara badan dhinac kale hal gujin ayaa keydisa waqti waxayna sidoo kale hubisaa in dukumiintiyada ku keydsan hal fayl loo gudbiyo dhinaca kale hab habeysan iyadoon laga boodin.
Faaiidooyinka Ka Baxsan: Winrar, oo ah mid aad u fudud in la isticmaalo, dhakhso leh, shaqeynaya iyo nidaamka hawlgalka software saaxiibtinimo leh, waa barnaamij ka shaqeeya meel ka baxsan baaxadiisa. Tusaale ahaan, waxay sidoo kale ka caawisaa soosaarayaasha barnaamijyada amarrada konsole. Aan sheegno in faylka cusboonaysiinta 20 MB lagu cadaadiyey 5 MB. Marka adeegsaduhu doonayo inuu sameeyo wax cusboonaysiin ah, wuxuu yeelan doonaa faa iido ah 15 MB.
Waa maxay astaamaha Winrar?
Winrar, oo ah barnaamij riixaya faylka oo deg deg ah oo aamin ah, wuxuu soo jiitaa dareenka astaamo badan oo farsamo marka la barbar dhigo barnaamijyada kale ee riiqidda. Magac ahaan:
Lahaanshaha muuqaalka luqadda Turkiga, Winrar wuxuu leeyahay taageero RAR iyo ZIP 2.0 oo buuxa.
Codsiyada 32-bit iyo 64-bit Intel ee codka, muusigga iyo faylasha garaafyada waxaa loo sameeyaa si dhakhso leh oo ficil ahaan mahadnaqa algorithm-ka riixa ee horumarsan.
Riixitaanka faylka waa mid deg deg ah oo fudud marka la jiido iyo la tuuro faylka.
Waxay leedahay astaamaha cadaadinta iyo xereynta faylal badan 10% -50% in ka badan barnaamijyada isku-buuqidda kale.
Waxay ka soo kabanaysaa faylal jir ahaan burburay oo la doonayo in lagu soo kabsado 10% -50% wax-ku-oolnimo ka badan barnaamijyada kale ee riiqidda.
Magacyada faylku waxay leeyihiin koodh caalami ah (Unicode).
Faylasha Ukb, sharraxaadda keydinta, 128 qarsoodi ah iyo diiwaanka qaladka ayaa lagu beddeli karaa mowduucyo badan iyo taageero interface.
Marka laga reebo RAR iyo ZIP, waxay akhrin kartaa oo kala saari kartaa ARJ, BZ2, CAB, GZ, ISO, JAR, LZH, TAR, UUE, 7Z iyo Z.
Waa barnaamij bilaash ah oo taageera afka Turkiga.
Sida loo isticmaalo Winrar?
Haddii aad rabto inaad ku cadaadin oo aad si ammaan ah ugu keydiso faylashaada Winrar, tallaabada ugu horreysa waa inaad barnaamijka ku soo dejiso kombuyuutarkaaga adoo dhahaya Soo dejiso Winrar. Adigoo adeegsanaya Winrar waxaad ku cadaadin kartaa faylasha 2 qaab sida RAR iyo ZIP. Isticmaalka Winrar waa mid aad u fudud oo wax ku ool ah. Hadda aan arrinta caddayno annagoo sharraxayna adeegsiga Winrar Windows tallaabo-tallaabo.
Ku billow ururinta faylasha aad rabto inaad ku cadaadi gal. Si kale haddii loo dhigo, luuqadda kombiyuutarka, faylasha la cadaadiyey waa inay ku jiraan isla URL. Ku -haynta faylkan desktop -ka waxay fududaynaysaa shaqadaada.
Midig guji faylka aad rabto inaad cadaadin Waxaad arki doontaa 4 ikhtiyaar, oo leh Add to Archive meesha ugu horeysa. Sii wad adigoo gujinaya Ku dar Kaydka. Waxaad ka dooran kartaa meesha feylka aad rabto inaad ku cadaadin halkan, waxaad dooran kartaa adoo baaraya xulashooyin badan oo badan. Aynu si faahfaahsan u isticmaalno Winrar, laga bilaabo qaybta Guud” ee is -dhexgalka Winrar.
Tab Guud ee Winrar
Bogga Guud” ee is -dhexgalka Winrar, waxaa ku yaal 7 ikhtiyaar oo saameeya isku -duubnaanta faylka, tayada iyo adeegsiga.
Ku Qaybi Tirada
Marka loo eego xulashada lagu sameeyay ikhtiyaar kasta, faylka la isku duubay wuxuu u noqonayaa mid wax ku ool ah oo dhakhso leh isticmaalaha.
1 - Magaca Kaydka
Qaybta magaca keydka waa qaybta faylka lagu keydiyo. Haddii aadan dooran meesha aad ku kaydiso faylka, faylkaaga ayaa lagu kaydin doonaa qaybtan. Markaad rabto inaad bedesho goobta keydinta, waxaad riixi kartaa badhanka Browse oo dooro qaybta aad rabto inaad ku cadaadin faylka. Goobta faylasha hore loo cadaadiyey ayaa sidoo kale si dhakhso leh loogu dooran karaa sanduuqa hoos-u-dhaca.
2 - Profiles
Waa ikhtiyaar waqti u badbaadinaya dadka isticmaala Winrar oo ku cadaadinaaya faylasha cabbirrada la rabo iyaga oo u kala qaybinaya qaybo. Waxaad u kala qaybin kartaa faylka 5GB qaybo oo waxaad uga wareejin kartaa hal meel meel kale oo leh 1GB flash memory. Waxa aad u baahan tahay inaad tan u samayso waa inaad ku abuurto 1 GB astaanta qaybta astaanta oo aad kaydiso adiga oo dooranaya habka cadaadiska.
Xulashada astaanta, oo milkiilayaasha madasha ay aad u isticmaalaan, ayaa fududeyneysa in la geliyo 100 MB gogo adeegyada kaydinta faylka daruuriga.
3 - Qaabka Kaydka
Kani waa qaybta qaabka faylka la riixayo la xushay. Taageeridda barnaamijka RAR iyo barnaamijka ZIP, Winrar wuxuu awood u siinayaa kaydinta dukumiintiyada ereyga Excel oo leh ZIP iyo faylal guud oo wata RAR.
4 - Habka Cadaadiska
Xulashada riiqidda, waa astaamaha goaaminaya baaxadda feylka la cadaadiyo oo saameeya tayada faylka. Habsocodyada oo qaata waqti gaaban in la cadaadiyo waxay keenaysaa in la cadaadiyo oo tayo hooseeyo. Waqtiga cadaadiska oo dheeraada, si ka fiican ayaa isku -duubnidu noqon doontaa. Daaqadda ka furmaysa habka riiqidda;
Ugu dhaqsaha badan
Waxay leedahay ikhtiyaarro.
Waa inaad xusuusataa marka aad ku cadaadinayso qaabka ugu dhaqsaha badan, waxaad ku cadaadin doontaa faylka tayada ugu hooseysa.
5 - U Qaybi Qaybo
Waxay bixisaa cidhiidhi gelinta feylka si loo cadaadiyo iyada oo loo qaybiyo qaybo cabbir la rabo. Waxaad ku cadaadin kartaa faylka 20GB adoo u kala qaybinaya 5 4GB oo faylal ah. Ku qor cabbirka qaybta ikhtiyaarka, faylkaaguna wuxuu u qaybsami doonaa qaybo cabbirkaas ah.
6 - Habka Cusboonaysiinta
Waxay u oggolaaneysaa inay cusboonaysiiso faylasha la cadaadiyey oo la keydiyay. Haddii feylka lagu darayo uu la mid yahay feylka ku jira keydka, wuxuu bixiyaa ikhtiyaar.
7 - Xulashada Kaydinta
Ikhtiyaarada kaydinta waa mid ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan ee Winrar marka la barbardhigo barnaamijyada kale ee riiqidda. Waxay bixisaa ikhtiyaarrada isticmaalka faylka inta lagu jiro ama kahor kaydinta. Kuwan;
Abuur Kayd Adag
Abuur Kaydka SFX
The Delete Files After Archiving command ayaa ogolaanaya in faylka laga saaro diskka adag.
Amarka Faylasha La Kaydiyay Tijaabada ayaa u oggolaanaya faylka la cadaadiyey in la tirtiro baaritaanka kadib.
Amarka Abuuritaanka Solid Archive waa hab cadaadis ah oo loo adeegsado qaabka RAR. Markaa, faylasha waxaa lagu cadaadin karaa si caafimaad leh.
Amarka kaydinta ee SFX waa muujinta awood u siinta feylka in laga furo kombiyuutarrada aan Winrar rakibin. Faylka la wareejiyay wuxuu u oggolaanayaa feylka in la furo xitaa haddii Winrar aan lagu rakibin kombiyuutarka xisbiga kale, waxaa mahad leh amarkaan.
Tab horumarsan oo ku yaal Winrar
In tabka horumarsan;
• Abuuritaanka Password -ka • Dejinta isku -darka • Dejinta SFX • Cabbirka Soo -kabashada • Dejinta mugga
Qeybtaan, waxaad ku abuuri kartaa lambar sir ah, sameysid nidaamyo isku soo ururin, samee cabir soo kabasho iyo mid mug leh, waxaadna abuuri kartaa feyl tayo leh.
Fursadaha Tab ee Winrar
Bogga Xulashada, waxaa jira badhanka tirtir faylka kadib abuuritaanka ee qaabka cusboonaysiinta. Halkan waxaad ku hagaajin kartaa sidaad rabto.
Faylasha Tab ee Winrar
Faylka feylasha, waad kala sooci kartaa feylasha aadan rabin inaad ku darto feylka la keydiyey, oo dib u habeyn ku samee feylkaaga isku-duuban
Tab Kaabta ee Winrar
Kani waa qaybta faylka qarsoon lagu keydiyo oo lagu kaydiyo. Barnaamijku wuxuu si otomaatig ah u kaydin doonaa faylka la cadaadiyey qaybta xiisaha leh.
Waqtiga Tab ee Winrar
Kani waa qeybta waqtiga goglan loo dhigay.
Sharaxaadda Tab ee Winrar
Waa qaybta qoraalka lagu daray faylka la abuuray. Waxaad dhammaystiri kartaa hannaanka cidhiidhiga faylka adiga oo ku daraya sharraxaadda ku saabsan waxa ku jira faylka ama tilmaanta aad rabto faylkaaga.
Xusuusin: Haddii aad midig gujiso faylka si loo cadaadiyo oo aad u isticmaasho amarka labaad ee cadaadiska, Winrar si dhakhso ah ayuu u cadaadin doonaa.
Marka la doorto Tifaftirayaasha iyo e-maylka, faylka waxaa lagu cadaadiyey isla galka oo lagu daray qaybta Lifaaqyada” ee barnaamijka iimaylka.
Iyada oo la adeegsanayo Compress, Magaca faylka iyo dir E-mailka, faylka temp-ka waa la cadaadiyey oo faylka waxaa lagu daraa cinwaanka emaylka ee caadiga ah.
Waa maxay Fidinta Fidinta ee Winrar Taageerto?
Waa fidinta faylka oo tilmaamaysa qaabka iyo qaabka faylku ku jiro. Dhammaan faylasha kombiyuutarka loo isticmaalo waxay leeyihiin kordhin. Waad ku mahadsan tahay kordhintaan, waxaad heli kartaa fikrad ah waxa faylku yahay iyo waxa barnaamijyada taageera faylkaan ku jira nidaamka hawlgalka. Markaan eegno fidinta fayl kasta oo laga soo dejiyey internetka, waxaan baran karnaa inaan feylka ku furi karno Excel ama Xafiis Furan.
Waxaad ku burburin kartaa faylka la soo degsaday ama emaylka lagu cadaadiyey Winrar. Sababtoo ah Winrar, oo ah barnaamijka faylka iyo keydinta faylka, wuxuu taageeraa feylasha badan sida ARJ, BZ2, CAB, GZ, ISO, JAR, LZH, TAR, UUE, 7Z iyo Z, marka laga reebo RAR iyo ZIP. RAR iyo ZIP faylasha ayaa ah feylasha la isticmaalo ee la isticmaalo. Waxaad soo dejisan kartaa softiweer Winrar oo lacag laaan ah si aad u furato faylashaas, waad furi kartaa oo isticmaali kartaa faylashaas oo leh muuqaalka fiidiyaha, kaas oo ka mid ah xulashooyinka badan ee ay bixiso Winrar.
Bixinta cadaadis ka fiican ZIP, RAR aad bay ugu awood badan tahay maaraynta kaydka. Si aad u furto fayl leh fidinta RAR, waxaad ku rakibi kartaa Winrar, oo ah barnaamijka riiqidda ee la doorbidayo.
Waa kuwee Habka Riixitaanka ugu Fiican ee Winrar?
Winrar, oo u saamaxaysa faylasha in la cadaadiyo oo lagu keydiyo beyad kombiyuutar, waxay bixisaa xalal aad wax ku ool u ah meel kaydinta iyo dhibaatooyinka amniga. Waxaa intaa dheer, feylasha si joogto ah ayaa loo kaydiyaa, kordhinta waxtarka isticmaale. Si kasta oo tiknoolajigu u horumarsan yahay, dhibaatada kaydinta xogta ayaa mar walba dhibaysa dadka isticmaala. In kasta oo la soo saaray cajaladaha adag iyo USB -yada xusuusta weyn leh, haddana waxaa la doonayaa in faylasha lagu hayo agagaarka kombiyuutarka. Winrar, oo loo isticmaalo barnaamijka ugu fiican ee wax lagu riixo waqtigan, wuxuu badbaadiyaa nolosha isagoo badbaadinaya meel leh astaamaha farsamo iyo shaqadiisa.
Hababka Riixitaanka Faylka Winrar
Winrar, oo ah barnaamijka ugu doorbidida badan marka la barbar dhigo kuwa kula tartamaya isku soo koobida faylka iyo keydinta shaqadooda, waa barnaamijka ugu caansan ee faylasha adduunka. Dunida maanta, halkaas oo ciyaaraha aad loogu horumaro marka la barbar dhigo 10 sano ka hor, halka 1 GB oo xusuusta gudaha ah ay ku filneed sannado ka hor, maanta awooddaani waxay u dhexeysaa 30-50 GB. Kuwa aan isticmaalin barnaamijka riixitaanka Winrar, dhanka kale, waxay kaydiyaan faylasha ay adeegsadaan ugu yaraan ama ay tahay inay tirtiraan ama ay tahay inay xasuusiyaan xusuusta. Halka Winrar uu yahay barnaamij riixitaan horumarsan oo aad ku kaydin karto faylasha waaweyn adigoo u kala qaybinaya qaybo. Faylasha loo qaybiyey qaybo ayaa si aan kala go lahayn loogu wareejin karaa dariiqyada laga saari karo.
Kala Faylasha Faylasha
Midig -guji faylka aad rabto inaad ku cadaadin Winrar, iyo shaashadda ku dar kaydinta, waxaa jira u qaybi mugga, cabbirka. Halkan, lambarrada inta MB ee faylka loo qaybin doono ayaa la galiyay oo badhanka OK” ayaa la riixay. Markaa, Winrar wuxuu faylka weyn u kaydiyaa qaab tayo leh isagoo u kala qaybiya qaybo. Xulashada Add to archive, waxaa la xulay Best compression option, feylka waxaa lagu cadaadiyey waqti inyar ka dheer sidii caadiga ahayd, laakiin sida ugu fiican.
Magaca faylka waa la qarin karaa iyadoo la dejinayo furaha sirta ee faylka ee tabka horumarsan. Haddii magaca faylka uusan sir ahayn, Winrar ma weydiin doono furaha sirta ah marka la furayo feylka. Si kastaba ha ahaatee, waxay weydiisataa furaha sirta ah ee ka soo horjeeda codsiga si aad u aragto ama u nuquliso xogta. Haddii aad rabto in feylkaaga laga ilaaliyo indho -indheynta oo la asturo, waa inaad u tagtaa sir -gelinta faylka si aad u hesho ammaan.
Winrar Habka ugu Fiican
Ikhtiyaarka ugu Fiican waa in loo xushaa isku -duubnaanta waxqabadka sare ee faylka. Ikhtiyaarkan, oo leh waqti isku -riixitaan ka dheer sidii caadiga ahayd, faylka waxaa lagu cadaadiyey waxqabadka ugu fiican. Markaa, Winrar wuxuu ka dhigaa hannaanka isku -buuqidda tayada ugu sarreysa.
Ka dib markaad xulato habka riixitaanka adiga oo gujinaya ikhtiyaarka Ugu Fiican, sanduuqa Abuur Rugta Adag ee aagga cas ee midigta waa in la hubiyaa. Ka -qaybinta qaybinta iyo goaaminta erayga sirta ah, ikhtiyaarka Abuur Kaydka Adag ayaa sidoo kale la hubiyaa oo hannaanka isku -riiqidda ayaa lagu bilaabaa adigoo riixaya badhanka OK. Kaydka adag waa hab isku koobid lahaansho oo waxaa taageera kaliya kaydinta RAR. Kaydadka ZIP ma aha kuwo adag Arkiifiyada adag waxay si fiican u qabataa in la cadaadiyo faylasha la midka ah iyo kuwa waaweyn.
Taa bedelkeeda, cusboonaysiinta kaydka adag ayaa gaabis ah, oo dhammaan kaydinta waa in la qeexaa si loo soo saaro faylka kaydka adag. Isla mar ahaantaana, suurtogal ma aha in la soo saaro fayl dhaawacan oo ku jira kayd adag.
Haddii aadan si joogto ah u cusbooneysiin doonin faylasha ku jira kaydka oo aad ka saarto wixii faylal ah kaydka marar badan, waxaad dooran kartaa ikhtiyaarka kaydka adag. Haddii kale, cadaadis laaan adiga oo aan hubin Abuur ikhtiyaarka kaydinta adag ayaa noqon doonta habka ugu fiican ee wax lagu cadaadiyo.
Waa in la ogaadaa in Winrar uusan ku cadaadin karin in ka badan 5-10 MB faylasha JPEG, PNG, AVI, MP4, MP3. Sababtoo ah faylashaani waa faylal la cadaadiyey mar hore.
Saamiga ugu fiican ee riixa waxaa loogu talagalay faylasha ku saleysan qoraalka. Tusaale ahaan, dukumintiga Word waxaa lagu cadaadin karaa 80%.
Waa maxay Teknoloojiyadda Riixitaanku Winrar adeegsado?
Winrar ayaa kaalinta koowaad kaga jira barnaamijka softiweerka feylasha iyo keydinta, faylalka hoos u dhigaya In ka badan 500 milyan oo qof oo adduunka ku nool ayaa isticmaalaya Winrar. Barnaamijka, oo qaatay carshiga WinZip, wuxuu ka helayaa dhibco buuxa isticmaaleyaasha xulashada luqadda Turkiga. Aynu eegno tiknoolojiyada riixa ee Winrar ka dhiga mid aad u fiican oo taxay faaiidooyinkooda.
Winrar Faylka Faylka
Waxaa ka mid ah hababka riixa faylka Winrar, waxaa jira kaydinta, ugu dhaqsaha badan, dhakhso leh, caadi ah, ikhtiyaarro wanaagsan oo ugu fiican. Ikhtiyaarradan, oo soo ifbaxa ka dib markii midig-guji faylka si loo cadaadiyo oo la yiraahdo ku dar kaydinta, ayaa goaaminaya waxqabadka iyo tayada faylka la cadaadiyey ka dib markii la shaqeeyay. RAR iyo ZIP -ka ayaa ah habka ugu fiican ee lagu riixo Winrar.
Haddii feylka lagu cadaadiyey RAR la rabo in lala wadaago ama lagu wareejiyo isticmaale kale, software Winrar waa in lagu rakibaa kombiyuutarka faylka loo diray. Haddii kale, dhibaato ayaa ka imaan doonta furitaanka faylka. Faylasha la isku cadaadiyey waa faylal uu furi karo isticmaale isticmaalaya WinZip. Haddii aan lagu rakibin WinZip, uma muuqato suurtagal in la furo faylkaan Winrar laaan.
Habka riixitaanka waxaa goaamiya isticmaalaha raba inuu cadaadiyo faylka. Waxaa ka mid ah ikhtiyaarrada, ikhtiyaarka Ugu Fiican” waa habka faylka ku cadaadinaaya heerka ugu sarreeya oo qaadanaya meel yar. Khasaaraha kaliya ayaa ah in geeddi -socodku waxyar ka dheer yahay xulashooyinka kale. Habka cadaadiska Ugu Fiican” ayaa sidoo kale la dooran karaa haddii cabirka faylka uu ka yar yahay 100 MB oo waxqabadka kombiyuutarku wanaagsan yahay. Haddii kombiyuutarku gaabis yahay oo cabbirka faylka la cadaadiyey uu weyn yahay, waxay noqon lahayd mid caqli gal ah in la doorto ikhtiyaarka Degdegga ah.
Furaha Faylka Winrar
Mid ka mid ah astaamaha ugu caansan ee Winrar oo ah teknolojiyad isku-buufinta faylka ayaa ah feyl fayl. In kasta oo ay tahay softiweer riixa, haddana sidoo kale aad bay ugu fiican tahay softiweerka sirta faylka. Muhiimada qarsoodiga faylka ee amniga ayaa maanta aad loo dareemayaa. Nidaamka sirta, oo ka hortagaya helitaanka dukumiintiyada muhiimka ah, wuxuu u oggolaanayaa faylka la isku dhejiyey in la furo oo uu arko kaliya isticmaalaha uu ka tirsan yahay. Xitaa helitaanka faylka, waxay umuuqataa wax aan macquul aheyn in la jabiyo eray sir ah oo ilaalin 128-bit ah.
Taageerada Processor-ka Dhowr ah
Noocii ugu dambeeyay ee winrar wuxuu taageeraa processor-ka multi-core. Haddii kumbiyuutarkaagu leeyahay processor-ka multi-core, waa inaad hubisaa inaad ka faaiidaysato. Sababtoo ah nuqulkii ugu dambeeyay ee Winrar wuxuu si firfircoon u adeegsadaa hawsha processor-ka badan. Markaa waxaad si dhaqso leh u samayn kartaa macaamilka. Si loo tijaabiyo; Softiweerka softiweerka, ka gal menu -ka dejimaha Xulashada, ka -dooro ikhtiyaarka Multithreading ee tabka Guud.
Tijaabada PC -ga oo leh Winrar
Ma ogtahay inaad ku tijaabin karto PC winrar? Waxaad ku cabbiri kartaa waxqabadka kombiyuutarkaaga imtixaanka PC -ga, kaas oo ah mid ka mid ah adeegyada ugu fiican Winrar. Xitaa waad baran kartaa dhibcaha Winrar uu siinayo nidaamkaaga hawlgalka, waad goaamin kartaa waxaad haysato adoo baranaya waxqabadka kombiyuutarkaaga.
Si loo tijaabiyo PC-ga Winrar; Samee software winrar, u tag menu Tools, hubi ikhtiyaarka tijaabada Xawaaraha iyo qalabka, Hel natiijada isla markiiba.
Dib u soo cesho faylasha kharribmay
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu jahwareersan ee adeegsadaha waa musuqmaasuqa faylka. Faylka kharribmay lama furi karo Gaar ahaan haddii uu yahay fayl muhiim ah, wuxuu abuuraa dhib badan. Winrar ayaa soo galay kiiskan sidoo kale. Haddii aadan furi karin faylasha la keydiyay oo la kharribay, waa inaad caawimaad ka heshaa Winrar. Tan awgeed; Orod Winrar, Xulo faylka aad rabto inaad ku dayactirto softiweerka, Riix badhanka dayactirka ee midigta sare
64 Waxqabadka Bit
Haddii kumbiyuutarkaagu yahay 64-bit, waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho ikhtiyaarka 64-bit ee Winrar. Haddii aadan haysan wax macluumaad ah oo ku saabsan sida loo helo faa iido, aan isla markiiba sharraxno. Winrar 64 waxoogaa ayaa siiya isticmaalaha faa iido weyn marka loo eego waxqabadka mashiinka iyo adeegsiga. Baadh qaybta nooca nidaamka ee daaqadda furan adiga oo riixaya furayaasha Windows + Pause isla mar. Haddii uu jiro sharaxaad nidaamka hawlgalka 64-bit halkan, waxaan ku talinaynaa in la isticmaalo nooca 64-bit ee Winrar.
Cabirka Faylka: 3.07 MB